Abavelisi bezitena kunye nabanikezeli - China Isiseko sezitena esiBumbeneyo
Isitena se-Magnesia chrome senziwe nge-high-grade magnesite clinker kunye ne-chromium oxide njengezinto ezingavuthiyo, ngokubumba koxinzelelo oluphezulu kunye nokudubula kobushushu obuphezulu, obona bushushu buvumelekileyo be-1700°C. Isitena se-Magnesia chrome sinokumelana okuhle nobushushu, ukumelana ne-alkali ephezulu kunye neempawu zokumelana ne-thermal ephezulu, kwaye inobuhlobo kwindalo kwaye inobomi benkonzo ende.
Izitena zekhaboni zeMagnesia zenziwe ngeqondo eliphezulu lokunyibilikisa i-alkaline oxide magnesium oxide (indawo yokunyibilika 2800 ° C) kunye nendawo ephezulu yokunyibilikisa izixhobo zekhabhoni ekunzima ukuyingeniswa yi-slag njengempahla ekrwada, kwaye izongezo ezahlukeneyo ezingezo-oxide ziyongezwa. Isixhobo esingavuthayo esidityanisiweyo sokudibanisa esidityaniswe nesibhambathiso sekhabhoni.
Eyona nto iphambili ekuveliseni izitena zekhabhoni yemagnesia, umgangatho we-magnesia unefuthe elibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwezitena zekhaboni yemagnesia. Ukucoceka kwe-magnesia kunefuthe elibonakalayo kuxhathiso lwe-slag ye-magnesia yezitena zekhabhoni. Ukuphakama komxholo we-magnesium oxide, ukungcola okungaphantsi, ukuthoba inqanaba lokuhlukaniswa kwesigaba sesilicate, kuya kuphakama inqanaba lokudibana ngokuthe ngqo kwe-periclase, kunye nokuchasana okuphezulu kokungena kwe-slag kunye nelahleko yokuncibilika kwe-slag. Ukungcola kwi-magnesia ikakhulu kubandakanya i-calcium oxide, i-silicon dioxide, kunye ne-iron oxide. Ukuba umxholo wokungcola uphezulu, ngakumbi i-boron oxide compounds, iya kuthi ichaphazele kakubi ukuphinda kusebenze kunye nokusebenza kobushushu obuphezulu bemagnesia.
Izitena zeMagnesia hercynite zinezibonelelo zokhuselo lokusingqongileyo ngaphandle kwe-chromium, uzinzo olomeleleyo lokuqina kokuqina, ulusu olulungileyo lokuxhoma ulusu, ukumelana nokulungela ukubola, ukunyuka okuncinci kwe-thermal kunye nokuqhuba okuphantsi kwe-thermal, kunye nolungelelwaniso olungcono lolwakhiwo. Kwizicelo ezisebenzayo, isitena sinobomi obungaphezulu konyaka omnye, isikhumba somlilo sixhonywe ngokukhawuleza kwindawo yokudubula, ubukhulu besikhumba somlilo siyalingana kwaye sizinzile, izitena ezithandabuzayo azinabungqina bukhulu, kwaye kukho akukho nto iphaphazelayo yezitena ezingafunekiyo xa kuvulwa eziko. Iqondo lobushushu lomgqomo weziko liphantsi, kwaye amandla obushushu alahleko kancinci.
Izitena zeMagnesia dolomite zenziwe nge-high-purity kunye ne-dense magnesia kunye ne-sintered magnesia dolomite sand okanye i-dolomite sand njengezinto zokwenza izinto. Ngokmimandla yokusetyenziswa eyahlukeneyo, khetha umlinganiso ofanelekileyo we-MgO kunye neCaO, sebenzisa isibopheleli esine-anhydr, kunye nefom kubushushu obufanelekileyo. , Ukushisa okuphezulu.
Izitena zeMagnesia dolomite zinokuxhathisa ngamandla kwi-iron ephantsi kunye ne-alkalinity ephantsi yokucoca i-slag ngaphandle kwesithando somlilo, kwaye iyanceda ekutshabalaliseni nasekudibaniseni ukususa ukungcola kwisinyithi, kwaye inefuthe lokucoca intsimbi etyhidiweyo. Isetyenziswa kwizitena zesamente, izitena ze-magnesia dolomite zinobudlelwane obukhulu kunye nesamente yesinki, kulula ukuxhonywa eziko, kwaye zinobungqingqwa obufanayo.
Umxholo we-magnesium oxide wesitena se-magnesia yi-90% -98%. Isitena saseMagnesia sinokumelana kakuhle nomlilo kunye nokumelana nomhlwa. Isebenzisa i-magnesium oxide okanye i-magnesia edibeneyo njengezinto ezingavuthi kwaye idutyulwa kubushushu obuphezulu be-1550～1600 ° C. Kukudubula kweemveliso ezisulungekileyo eziphezulu. Ubushushu bungaphezulu kwe-1750 ℃. Ziyakwazi ukumelana nokubola kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo ezinobushushu obuphezulu.